Hoos U Dhacii U Weynaa Saliida, Saamaynta Saamiyada Seyladaha Dunida Oo Balaayiin Ku Waayay Iyo Sababaha Keenay | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Hoos U Dhacii U Weynaa Saliida, Saamaynta Saamiyada Seyladaha Dunida Oo Balaayiin Ku Waayay Iyo Sababaha Keenay
Waxay arrintan saamaysay Dalalkii ugu qanisanaa ee Khaliijka iyo dhammaan Suuqyada Saamiyada Dunida
New York(ANN)-Suuqyada ganacsiga aduunka, ayaa si weyn u hoobtay, waxayna saamayn ku yeesheen dhaqaalaha aduunka, iyadoo dalal baddan oo kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida ay dareemeen hoos u dhac weyn.
Dhaqaalaha aduunka waxa si weyn saamayn ugu yeeshay Fayriska cudurka Coronavirus oo isuga gudbay qaaradaha dunida, isla markaana wer-wer ku abuuray inta badan nolosha aadamaha, kaas oo sababay inuu xanibo dhaq-dhaqaaqa iyo isu socodka dunida, gaadiidka kala duwan ee awal sida xorta ah isaga gooshaayay dacalada dunida iyo weliba shaqooyinka iyo dhaq-dhaqaaqa macaamilka dalalka dunida iyo xataa magaalooyinka dalalka uu haleelay Coronavirus oo joojiyay gebi ahaanba dhaq-dhaqaaqa isu socodka iyo kulamada.
Qiimaha saliida ayaa gaadhay hoos u dhacii ugu weynaa muddo dheer, iyadoo dalalka Khaliijka ee qaniga ku ahaa Saliida, isla markaana dhaqaalahoodu ku xidhnaa qiyaastii 80-90%, ay si weyn u dareemeen saamaynta dhaqaale ee Coronavirus oo sababay inuu shidaalku dego boqolkiiba 30%, sidoo kale saliida & gaasta Yurub ayaa hoos u dhacday 13%, ka dib markii Sacuudi Carabiya ay bilaabeen dagaal qiime-dhimis ah xagga saliid ah oo ay la galeen Ruushka, iyaga oo laayay qiimihii hore ee rasmiga ahaa ee lagu iibinayay, isla markaana bilaabay inay kordhiyaan qorshayaasha wax-soo-saarka ilaa bisha soo socota.
Suuqa Badeecadaha culus ee London ee FTSE 100, ayaa hoos u dhacay 6 boqolkiiba, iyadoo meelaha shidaalka laga qodo ee shirkadda waaweyn ee BP iyo Royal Dutch Shell ay labaduba ku dhowdahay inay boqolkiiba 20 % dareemaan hoos u dhac, waxayna ku tilmaameen maantii ugu adkayd, ama ugu xumayd ee ay arkaan.
Dhammaan suuqyada ayaa laga dareemay argagax, iyadoo shirkadoo waaweyn ay burbureen isniintii, waxayna khuburada dhaqaalaha aduunku ku sababaysay fiditaanka Coronavirus ee sida xawliga ah u faafaya, kaas oo looga baqayo dhaqaalaha adduunka, shirkaddaha Tamarta ayaa waayay boqolaal bilyan oo ay ku waayeen qiimaha saliida ee sababay argagaxii ugu weynaa ee soo mara dhaqaalaha.
Suuqyada Aasiya, Saamiyada qaaradda ayaa hoos u dhacay Isniinta, iyada oo suuqyada waaweyn ee gobolka oo dhan ay arkeen khasaare lixaad leh.
Kaydka shiinaha ayaa hoos u dhacay, iyada oo laga baqayo saameynta dhaqaale ee cudurka faafa ee coronavirus-ka adduunka.
AKHRI: Coronavirus Oo Ku Hanjabay Inuu Kala Qoqobayo Aduunka Iyo Qaylada Isaga Yeedhay Dacalada Dunida
Tixraaca CSI300, wuxuu hoos u dhigay 3.4 boqolkiiba inuu ku xidho 3,997.13 dhibcood, halka kooxda ‘Shanghai Composite Index’ ay hoos u dhacday boqolkiiba 3.0, ilaa 2,943.29 dhibcood.
Qeybaha ayaa ku dul booday guddida, oo ay kala jiidayeen alaabada iyo shirkaddaha macaamiisha, waxayna iyagoo ka cabsanaya xaalada soo waajahday maal-gashadayaasha shisheeye, kuwaas ku iibiyey saamiyo waaweyn oo qiimahoodu ka badan yahay 12 bilyan oo yuan ($ 1.73 bilyan) iyada oo loo sii marayo isku xidhka saamiyada isku xidhaya dhul weynaha shiinaha iyo Hong Kong, isla markaana maal-gashadayaasha shisheeye doonayaan inay ku deg-degaan si ay u iibsadaan hanti aan khatar ku jirin xilligan.
walaw khasaaraha dhanka Shiinaha marka loo eego suuqyada kale, oo ay ka caawisay tirada kiisaska fayraska cusub ee Shiinaha hoos u dhaca yari ku yimi iyo filashada taageerada siyaasadeed ee Beijing ee sii xoojinaysa, maadamaa shiinuhu yahay dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn.
Celceliska Tokyo Nikkei wuxuu hoos u dhigay 5.1 boqolkiiba, isagpo horeba ugu xidhnaa 14 bilood hoos u dhac, taas oo loo aanaynayo faafitaanka Coronavirus ee adduunka iyo burburka qiimaha saliidda oo sababay iibinta xaraashka ah ee saamiyada culus.
Kaydka Hong Kong ayaa hoos u dhacay iyadoo laga cabsi qabo inay korodho hoos u dhac caalami ah oo uu sababay cudurka ‘coronavirus’. Tilmaanta ‘Hang Seng Index’ waxay xidhaysaa in ka badan 1,100 dhibcood oo hoos uga dhacday 4.23%, taas oo ku xidhaysa 25,040 dhibcood.
Dhimashada tirada dadka uu ku dhacay cudurka ‘coronavirus’ ayaa kor u dhaaftay 110,000 adduunka oo dhan, iyadoo cudurku gaadhay dalal ka badan 80, isla markaana sababay inuu wiiqo dhaqaalaha aduunka. Kaydka Hindiya ayaa isniintii sheegay taariikhdoodii ugu xumayd ee hal maalin dhacda muddo ka badan afar sano, taasoo daba socota suuqyada adduunka ee hoobanaya.
Suuqa Badeecaddaha India, ee NSE Nifty 50, ayaa xidhmay qiyaastii 4.90 boqolkiiba 10,451.45, hoos u dhacii ugu xumaa ilaa tan iyo August 2015, waxayna astaamaha ‘S&P BSE Sensex’ ku dhammaadeen 5.17 boqolkiiba, iyagoo gaadhay qiyaastii meel hoose 35,634.95.
Dhinaca kale, dalalka Khaliijka ee saliida qaniga ku ahaa ayaa si weyn u dareemay hoos u dhaca Kaydka oo xidhiidh la leh kadib shilkii qiimaha saliida iyo sababta faafitaanka Coronavirus oo usoo talaabay dhankooda todbaadyadii u danbeeyay.
Waxayna Suuqyada saamiyada ee waddammada Khaliijka isniintii waajaheen qiima sida weyn u degey ee saliida oo ah isha ugu muhiimsan ee dhaqaalahoodu ku tiirsanaa, iyadoo arrintan marka laga yimaado Coronavirus ay sii caawisay ka dib markii qiimaha saliida uu ku bur-burtay dagaal soosaarayaasha saliidu ay ku guul darreysteen kadib markii ay heshiis ka gaadhi waayeen wax-soo-saarka.
Dhammaan toddobada suuq ee Khaliijka Khaliijka ayaa ku sugnaa casaanka maalintii labaad laba maalmood oo isku xiga, iyada oo khidmadda Sacuudiga Tadawul ay hoos u dhacday 9.4 boqolkiiba bilowgii ka hor inta aanay dib uga soo kaban khasaaraha dhowaan soo gaadhay duqayntii Saudi Aramco ee Xuutiyiinta.
Arrintaa oo sababtay in Suuqa Sacuudigu hoos u dhaco 6.1 boqolkiiba, iyadoo awoodda wax-soo-saarka ee Saudi Aramco ay hoos u dhacday 6.8 boqolkiiba, taas hoos u dhacday 10 boqolkiiba bilowgii.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay, ilaa $ 270 bilyan oo doolar ayaa laga dhimay qiimaha raashiinka shirkadda ugu weyn adduunka. waxayna Awoodda madaxdyadeedu taagan yihiin $ 1.49 tiriliyan, taas oo ka hooseysa $ 2 tiriliyan oo ah yoolkii boqortooyadu doonaysay.
Wasiirka arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga ee dalka Faransiiska, Bruno Le Maire, ayaa sheegay in Saudi Arabia ay midayso sicirka saliida si looga fogaado carqalad dhaqaale oo ku timaada wadamada kale.
Tusmada ugu saraysa ee suuqyada dhaqaalaha Kuwait ayaa hoos u dhacday 10.3 boqolkiiba ganacsigana waa la hakiyay maalintii labaad , halka All-Shares Index uu lumiyay 8.6 boqolkiiba.
Sidoo kale, Suuqa Dhaqaalaha ee Dubai ayaa hoos u dhacay 8.3 boqolkiiba, taas oo u dhow, ama lagu qiyaasay heerkiisii ugu xumaa muddo toddobo sanno ah, laakiin mas’uuliyiintu waxay hakiyeen ganacsiga inta badan saamiyada ka dib markii ay hoos u dhigeen xaddiga ugu badan ee maalinlaha ah 10 boqolkiiba.
Suuqa sarifka lacagaha ee ‘Abu Dhabi’ ayaa hoos u dhacay 8.1 boqolkiiba, kaas oo gaadhay muddo afar sanno ah halkii ugu hoosaysay, halka sarrifka Qadar uu hoos u dhacay 9.7 boqolkiiba.
Sidoo kale, dawladdaha yaryar ee Cumaan iyo Baxrayn ayaa hoos u dhacay 5.6 boqolkiiba iyo 5.8 boqolkiiba, siday u kala horreeyaan, waxayna maalinta ganacsiga ugu horreeya ee toddobaadkan qaadeen tallaabo, iyagoo tobaneeyo bilyan oo doollar ka tuuray qiimahooda, taas oo sababtay in Sacuudiga ay hoos uga dhacday 8.3 boqolkiiba.
Qiimaha Saliida oo hoos u dhaca, ayaa aad ugu nugul dhaqaalaha wadamada Khaliijka ee Lixda ah, kuwaas oo loo yaqaan iskaashiga khaliijka (GCC) oo inta u dhaxeysa %70- %90, dalalkaa dakhligoodu yahay Saliida.
Khasaaraha ka dhashay qiimaha saliida ayaa ku soo beegmaya xili lixda dal ee Sacuudiga, Baxrayn, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Isutagga Imaaraatku ay la halgamayeen sidii ay u maarayn lahaayeen hoos u dhac miisaaniyadeed oo isdaba joog ah, isla markaana qaadaya talaabooyin cabudhin ah.
Coronavirus, ayaa noqday masiibada ugu weyn ee Sicirka saliida bur-buriyay furitaanka, iyadoo qiimaha uu gaadhay $ 36 foostadii, waxaana la saadaalinayaa in Khasaaraha saliidda ee argagaxa qiimaha dagaalka socda uu sii socon karo muddo dheer.
Dhinaca kale Machadka Maaliyadda Caalamiga ah (The Institute of International Finance), ayaa sheegay in deymaha wadamada khaliijka ay ka kordheen $ 30 bilyan sannadkii 2014, halka ay gaadheen ilaa $ 220 bilyan bishii Diseembar 2019, sidaana waxa soo werisay shabakadda wararka ee New Khaleej.
Anas al-Hajji, waa khabiir ku takhasusay saliida oo fadhigiisu yahay Texas, wuxuu ka waramay muddada ay sii socon karto in qiimaha saliida uu sidan kusii socon karo.
“Laakiin marka loo eego hoos u dhaca qiimaha badan … waxaa la rajeynayaa inay mar labaad billaabaan iskaashiga bisha March… waxayse u badan tahay inay dhici doonto bisha July,” marka kulammada OPEC loo qorsheeyay, sidaa waxa wakaaladda wararka ee AFP, u sheegay Anas al-Hajji, oo ah khabiir dhanka Saliida ah.
Iyada oo cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan coronavirus uu ku dhinto dad badan oo adduunka ah, ganacsadayaashu waxay ka cararayaan hantidooda halista ah waxayna galeen aagag nabdoon, iyagoo u diraya dahabka iyo yen-ka oo ku riixaya wax-soo-saarka Mareykanka khasaare cusub.
Dhaqaalaha Maraykanka oo ka mid ah dalka ku faana inuu yahay hoggaamiyaha Dhaqaalaha dunida, waxa uu galay khasaarihii ugu weynaa oo suuqyada saamiyada Ne Yor xusuusiyay xiiligii ugu xumaa ee soo mara kadib Isniintii Oktoobar 19, 1987, ee loo bixiyay (Black Monday 19 Oct, 1987) suuqa saamiyada oo maalin keliya ku dumay.
Xilligaa wuxuu degay dhaqaalaha Maraykanku 22.6% taas oo ahdy arrin la yaab leh, wuxuuna ahaa khasaaraha ugu weyn ee hal maalin taariikhda, kaas oo ka weynaa burburkii suuqa saamiyada ee 1929, wax yar uun kahor Murugada weyn. … Markuu xaddiggu xidhmayo, isagoo taagnaa 1,738.74, wuxuu hoos uga dhacay 508 dhibcood, haanata xilligan March 2020 Coronavirus wuxuu dhaqaalaha Maraykanka xusuusiyay murugada xilliyadaa, iyadoo aan la saadaalin karin inta ay xaaladu sidan sii ahaanay.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa bilaawday dagaal shidaal oo dhan axadii iyadoo qiimaha ugu weyn uu hoos u dhacay 20-kii sano ee la soo dhaafay, Bloomberg News ayaa werisay, ka dib markii OPEC iyo xulafadeeda ay ku guuldaraysteen inay xalliyaan heshiis lagu yareynayo wax soo saarka.
Saudis “waxay ka jawaabayaan bixitaanka Russia ee goynta wax soo saarka iyaga oo bilaabay dagaal qiimo,” Bill Farren-Price, oo ah agaasimaha saldhiga Britain ee R S Energy, ayaa u sheegay AFP.
“Waxaynu aragnay waa wax argagax ku keenay kaydkii dhaqaalaha, maaha mushkilad baahi abuurtay, ”ayay tidhi Renata Klita, oo ah falanqeeye sare oo maamule ka ah guryaha London & Capital.
Indhaha caalamka oo dhami waxay hadda ku jeedaan barnaamijka siyaasiga ee Bankiga Dhexe ee Yurub khamiistii, ka dib markii sicirka dulsaarka ay jareen bangiyada dhexe ee Mareykanka, Kanada iyo Australia todobaadkii hore si ay u maareeyaan dhaqaalaha ciiray ee uu sababay cudurka dillaacay.
Saamiyada Yurub ayaa sidoo kale hoos u dhacay isniintii, iyadoo laga baqayo in hoos u dhac caalami ah ay ku kordhiso boqolkiiba 25 hoos u dhaca qiimaha saliidda iyo xidhitaanka suuqyada waqooyiga Talyaaniga si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus.
Tirakoobka lagu sameeyay suuqa yurub, ayaa qarka u saarnaa inuu hoos u dhaco boqolkiiba inta ugu badnayd tan iyo bishii Juun 2016, markii Britain ay u codeysay inay ka baxdo Midowga Yurub, waxayna Shirkadaha reer yurub hada lumiyeen ku dhawaad $ 3 tiriliyan oo doolar tan iyo markii uu sida xawliga ah ugu faafay coronavirus bishii Febraayo.
Dawladda Talyaaniga ayaa balan qaaday qiyaastii 7.5 bilyan yuuro ($ 8.55 bilyan), taas oo ah talaabooyin lagu caawinayo dhaqaalihi horeyba u ciirayay ee Talyaaniga.
“Waxaan rabaa in Sacuudi Carabiya, oo ah madaxweynaha waddamada ugu qanisan ee G20, ay gasho sidii meesha looga saari lahaa su’aasha qiimaha saliidda si aannay u ruxin suuqyada,” Le Maire oo ah Wasiirka Dhaqaalaha ee Faransiiska, ayaa u sheegay raadiyaha France Inter.
Sacuudiga wuxuu qaatay ficiltan abuuray ‘naxdin iyo argagax ah, taas oo ka dhan ah xafiiltanka ka dhex jira suuqa saliida. ayuu raaciyay Le Maire.
Warbixinaha qaar ayaa sheegaya in la filayey in qiimaha saliida Foostadii hoos u dhaco $ 10 sanadka 2020, taas sabab looga dhigay dalabka adduunka oo hoos u dhacay. waxaana la saadaaliyay inay arrintan daciifin doonto mowqifka wadamada soo saara saliida ee Bariga Dhexe iyo Afrika.